कुरा चपाएर कुरा गर्नु किन ? लिटरेचर फेस्टिभलमा वार्ता र संवादको विषय जेसुकै होस्, त्यसको चुरो कुरो राजनीति हो । राजनीतिक राजनीति । साहित्यिक राजनीति । समाजशास्त्रीय राजनीति । अर्थशास्त्रीय राजनीति । नीतिशास्त्रीय राजनीति । कोकशास्त्रीय राजनीति । आदि इत्यादि । र नै फेस्टिभलमा अगाडि वा शीर्षक वा प्राथमिकता वा वर्चश्वको प्रश्न यति गम्भीर भएको हो । आयोजकका शिरमा प्रायोजक सवार हुने हो भने नेपथ्यमा फेस्टिभलको निर्णयकारी प्रायोजकै हुने भयो । र, सर्वेसर्वा एवं वर्चश्वकारी पनि उही । त्यसैले जिज्ञासु जनको प्रश्न ठीकै हो— यो कसको र कस्तो फेस्टिभल हो ?
पोखरामा छु, लिटरेचर फेस्टिभल अर्थात् साहित्य पर्वमा । आआफू परियो न यसको आयोजक न यसको प्रायोजक । तैपनि एउटा प्रश्नले मलाई आफ्नै छायाले झैँ नित्य पछ्याइरहेको छ । यहाँदेखि होइन, काठमाडौँदेखि नै । भन, यो कसको फेस्टिभल हो ? जिज्ञासु जनको प्रश्न हो यो । अरे, यो कस्तो प्रश्न हो ?शुरुमा म अलमलिएँ । लाटो विचारले मैले सोझो उत्तर दिएँँ— विचार र कलामा जसलाई चाख छ, यो उसैको फेस्टिभल हो । अर्थात् हामी सबैको । तर यो अविचारित उत्तरले जिज्ञासु जनको चित्त बुझेन । तिनले कुरो नङ्ग्याउँदै थप प्रश्न तेस्र्याए— यो ‘आइएमई’ लिटरेचर फेस्टिभल हो कि जनमुखी लिटरेचर भेस्टिभल ? मेरो लाटो बुद्धिमा अब भने खुल्यो । यो जिज्ञासामा गाँठ्ठी कुरो अघि र पछिको रहेछ । अर्थात् प्राथमिकताको । अर्थात् वर्चश्वको ।
भूगोलमा अघि र पछि हुँदैन । न त भूगोलमा तल र माथि नै हुन्छ । अघि र पछि एवं तल र माथि मानव निर्मित धारणा हुन् । मानिसले आप्mनो सजिलोको लागि बनाएका धारणा । यी धारणा जब संस्कृतिमा प्रवेश गर्छन् तब यी उचनीचको अर्थ बोक्ने भरिया बन्छन् । बस्, अर्थभेद वा अर्थको खतरा यहीँबाट शुरु हुन्छ । हो, यही अघि र पछिले फेस्टिभल कसको र कस्तो भन्ने प्रश्न उठाएको रहेछ । सतहमा यो प्रश्न सामान्य र सरल लाग्छ । तर अन्तर्यमा यसको अर्थ गहन र जटिल रहेछ । यसले तँ अघि कि म ? तँ ठूलो कि म ? तेरो स्वार्थ माथि कि मेरो ? तेरो वशमा म कि मेरो वशमा तँ ?बस्, अर्थको जटिलता वा खतराले यस्ता अनेक प्रश्नको लस्कर लगाउँदो रहेछ ।
अबलाई कुरो खोलेर कुरो गरुँ । पोखरा लिटरेचर फेस्टिभलको अगाडि ‘आइएमई’ लेखिएको छ । भित्ताभरि, पोस्टरभरि जताततै ‘आइएमई’ अगाडि छ । फेस्टिभलको आयोजक छ फाइन प्रिन्ट, अगाडि नाम छ ‘आइएमई’को । के ताल हो यो ? आयोजक फेस्टिभलको स्रष्टा हो । र, यसको कर्ता पनि उही हो ।
‘आइएमई’ त प्रायोजक हो । प्रायोजक अर्थात् अर्थदाता । अर्थात् द्रव्यदाता सहायक । आयोजक फेस्टिभलको मूल स्तम्भ हो, प्रायोजक केवल त्यसको टेको । अनि कसरी ‘आइएमई’को नाम भेस्टिभल अगाडि आयो ? हुनुपर्ने त यो फेस्टिभलको पादटिप्पणी पो हो । यो कसरी शीर्षस्थानको शीर्षक भयो ?
‘आइएमई’ एक कर्पोरेट महाजन हो । ‘आइएमई’को स्वभाव र रुचिअनुसार यसको लिटरेचर कस्तो होला ? उत्तर सिधा छ । त्यो बजारे लिटरेचर हुनेछ । त्यो बजारु लिटरेचर हुनेछ । त्यो लोभमुखी र लाभमुखी लिटरेचर हुनेछ । लिटरेचर त्यस्तो अनर्थ नहुन आखिर हुनुपर्ने के हो ? हुनुपर्ने ‘फाइनप्रिन्ट लिटरेचर फेस्टिभल’ हो ? जो कर्ता हो, लिटरेचरको शीर्षकमा ऊ हुनुपर्ने हो । आफ्नो शिरमाथि प्रयोजकलाई राखेपछि के हुन्छ ? लिटरेचर गडबड हुन्छ । त्यहा“ लिटरेचरको जनमुखी चरित्र छुट्छ । त्यहाँ लिटरेचर लोकहितकर हुन छाड्छ । त्यहाँ लोकको शिरमा स्वार्थी बजारले गिर खेल्न थाल्छ । अनि ? अनि लिरेचरका नाममा गाईजात्रा हुन्छ ।
अहिले झल्याँस्स सम्झेँ । ट्वीटरमा लिबाडीले यसबारे टुच्च दिएका थिए । त्यो टुच्चमा व्याख्या थिएन, केवल सङ्केत थियो । त्यो सङ्केतमा कटाक्ष गरिएको थियो— लिटरेचरको शिरमाथि ‘आइएमई’ ? हैट, अनर्थ ! लिबाडी अराजकको यो अराजक कुरो होला भनेर मैले एक कानले सुनेर अर्कोले उडाइदिएको थिएँ । अहिले जनजनका जिज्ञासाले आँखा खोलिदिएपछि थाहा भयो, लिबाडी ब्रोको कटाक्षको अर्थ त गहिरो पो रहेछ बा ।
कतिपय ज्ञानीहरू भन्लान्— यो अघि र पछिको माथापच्ची व्यर्थको लाल बुझक्कडी हो । हो र ? भुक्तभोगीको तीतो अतीत भन्छ— यो व्यर्थ होइन । न त यो लाल बुझक्कडी नै हो । केही वर्षअघिको कुरा हो । एउटा लिटरेचर फेस्टिभलमा विचित्र भा’थ्यो । सहभागी वक्ताहरूको सूचीमा मान्यवर प्रदीप गिरीको नाम थिएन । कार्यक्रममा मानौँ कतै नील गगनबाट श्री गिरी मञ्चमा अवतरित भए । गुह्य के रहेछ भनेर यसो बुझ्न खोज्दा थाहा भयो— गुह्य खत्तम रहेछ । आयोजकसामु अर्थदाता प्रयोजकको शर्त रहेछ— लिटरेचर फेस्टिभलमा राजनीति वर्जित छ । राजनीतिकर्मीको उपस्थिति वर्जित छ । फेस्टिभलमा केवल ब्वाइलर टाइपका नरम कुराहरूलाई छूट छ । केवल सिने सुन्दरीहरूको हाउभाउलाई छूट छ । सिर्फ बजारु सेलिब्रिटीहरूको तामझामलाई छूट छ । मात्र हल्काफुल्का हास्यलाई र छिपछिपे हास्यकारको नौटंकी नर्तनलाई छूट छ ।
ल हेर्नोस्, अर्थदाता प्रायोजक लिटरेचर फेस्टिभलको घाँटीमा कसरी सुर्काने कस्छ ! फेस्टिभल नगरुँ, लोकका चित्तमा अपेक्षा जगाइएको छ । गरुँ, आयोजकलाई यस्तो हत्ते छ । वास्तवमा लिटरेचर फेस्टिभलमा गर्ने नै राजनीतिक कुरा हो । भ्रष्ट राजनीतिका सट्टा स्वच्छ राजनीतिका कुरा । दुष्ट राजनीतिको सट्टा अनुरागयुक्त राजनीतिका कुरा । स्वार्थी राजनीतिको सट्टा त्यागी राजनीतिका कुरा । विलासी राजनीतिको सट्टा सादा राजनीतिका कुरा । कपटकारी र ढोँगी राजनीतिको सट्टा प्रस्टाप्रस्टी र पारदर्शी राजनीतिका कुरा ।